रेमी भनेको के हो?
रेमी कपालको कपाल भनेको त्यसको कणो एउटै दिशामा गहिरो छ। कटाई बाल शाफ्ट को माइक्रोस्कोपी स्केल हुन्। जब तिनीहरू एउटै दिशामा पङ्क्तिबद्ध हुन्छन् यो टंगलिंग घटाउँछन्। रेमी कपाल गुणस्तरमा धेरै उच्च छ।
कितना शिपिंग छ? शिपिंग कति लामो हुन्छ?
हाम्रो शिपिंग नीति हेर्नुहोस्।
मलाई कस्तो बन्डल चाहिन्छ?"
हाम्रो कपालको बारे मा 3.5 प्रति बन्डल (दे वा लिनुहोस्।2ओज) त्यसैले हामी निम्नलिखित सिफारिस गर्दछौं:
पर्म यकीका लागि, कोर्स याकी र किन्की सिधा बनावटहरू हामी निम्न अनुशंसा गर्छौं
1 को बारे मा अर्ध सीलिन - 1.5 बन्डल (तपाईंको आफन्तको आधा बाहिर छ)
2-2.5 बन्डलहरूको बारेमा आंशिक सिलाई (भाग र पक्षहरू बायाँ बाहिर)
2.5 को बारेमा पूर्ण सिलाईन - 3.0 बन्डलहरू (कुनै कपाल बाहिर निस्किएको छैन)
2 बन्डलहरू र बन्दको बारेमा बन्दको साथ पूर्ण सिलाई
यदि तपाईं अझै पनि आवश्यक रकम को अनिश्चित हुनुहुन्छ भने हामीलाई बनावट, लम्बाई, र शैलीको साथ हामीलाई ईमेल पठाउनुहोस् र हामी तपाईंलाई मद्दत गर्नेछौं।
क्युलीको लागि, किन्की कर्ली र कोइला बनावट हामी निम्न सल्लाह दिन्छौं
2.5 बन्डलहरूको बारेमा आंशिक सीलिन (भाग र पक्षहरू बायाँ बाहिर)
अफ्रिकी किन्की बनावटको लागि हामी निम्न सल्लाह दिन्छौं
1 बन्डल को बारे मा अर्ध सील (तपाईंको आफन्त को आधा भाग बाहिर छ)
1.5- 2.0 बन्डलहरूको बारेमा आंशिक सिलाई (भाग र पक्षहरू बायाँ बाहिर)
2.o - 2.5 बन्डलहरूको बारेमा पूर्ण सीलिन (कुनै कपाल छोडिएको छैन)
*** लामो बन्डलहरूले यो एक्सटेल्सले 20 लम्बाइको साथ छोटो पार्दछ "वा अझ बढी मोटाई प्राप्त गर्न माथिको सूचीमा थप बन्डल थप गर्नुहोस्।
म कसरी छनौट गर्ने छनौट गर्ने विकल्प देख्नुहुन्न?
हाम्रो एक्सटेन्सन रंगमा वर्जिन छन्। यसको अर्थ उनीहरूलाई रसायन प्रयोग गर्न नसक्ने कुनै पनि तरिकामा उपचार गरिएको छैन। सबै एक्सटेन्सनहरू उनीहरूको प्राकृतिक कपाल रंगमा आउँनेछन् जुन कालो बन्द धेरै गहिरो ब्राउन हुन्छ। यद्यपि तपाईं कपाललाई रंग्न सक्नुहुनेछ तपाईलाई चाहिन्छ।
के कस्ता रंगहरू वा ब्लाउड हुन सक्छ?
हो यो। याद गर्नुहोस् यो वास्तविक मानव कपाल हो। ब्लीच गर्दा सावधानी लिनुहोस्। कपाललाई बिरोध गर्न कर्ल ढाँचामा रासायनिक ढङ्गले रासायनिक हुन सक्छ। कुनै पनि रंग उपचारका लागि सधै एक पेशेवर देख्नुहुन्छ। यद्यपि हामी भन्छौं कपाल कपाल रंग्न सकिन्छ हामी कुनै पनि रासायनिक परिवर्तन पछि गुणवत्ताको ग्यारेन्टी गर्दैनौं।
के म यस कपाल को लोहा को फ्लैट गर्न सक्छु?
Perm Yaki र Kinky सीधा हाँ, तपाईं यो बाहिरी फ्लैट गर्न सक्नुहुन्छ, तथापि किन्की घुमावटको ढाँचाको लागि तपाईं फलामलाई फ्याट गर्न सक्नुहुन्छ तर यो सिफारिश गरिएको छैन। यो कपाल यसको सुन्दर 3C-4c बनावटहरू प्राप्त गर्न प्रशोधन गरिएको छ र चरम गर्मीले कर्ल ढाँचाको सानो ढङ्गले घटाउन सक्छ। यदि तपाइँ सबै बनावटको साथ फ्लैट फलाममा छनौट गर्नुहुन्छ भने कृपया एक गर्मीको सुरक्षात्मक प्रयोग गर्नुहोस्।
तिम्रो कपाल कस्तो छ?
हाम्रो कपाल यसको बलियो अवस्थामा राज्यमा बाल शाफ्टको तल्लो भागमा मापन गरिएको छ। कपाल यसको घुमाउरो / तरकारी राज्यमा मापन गरिएको छैन।
पर्म Yaki सङ्ग्रह लम्बाइको लागि सही छ (कुनै सिकुना)
कोर्स याकी र किन्की विद्वान संग्रहले एक्सएनएक्सएक्स / एक्सएनएमएक्सक्सको बारेमा सिक्नका लागि अनुभव गर्नेछ (पूर्व। यदि तपाईं 1 लाई आदेश दिनुहुन्छ "यो एक्सएनएमक्स हुन सक्छ" केन्की बनावटको कारण)
घुम्ने संग्रह सिक्रति चार्ट (तल घुम्नका लागि तल विवरणहरू हेर्नुहोस्)
एक 10 "बन्डल = 5" -6"अज्ञात (यो केवल एक अनुमान हो)
एक 12 "बन्डल = 6" -7 "अज्ञात (यो केवल एक अनुमान हो)
एक 14 "बन्डल = 7" -9"अज्ञात (यो केवल एक अनुमान हो)
एक 16 "बन्डल = 9" - 10 "अज्ञात (यो केवल एक अनुमान हो)
एक 18 "बन्डल = 11" -12 "अज्ञात (यो केवल एक अनुमान हो)
एक 20 "बन्डल = 13" -14 "अज्ञात (यो केवल एक अनुमान हो)
एक 22 "बन्डल = 15" - 16 "अज्ञात (यो केवल एक अनुमान हो)
एक 24 "बन्डल = 17" -18 "अज्ञात (यो केवल एक अनुमान हो)
एक 26 "बन्डल = 19" -21 "अज्ञात (यो केवल एक अनुमान हो)
एक 28 "बन्डल = 22" -23 "अज्ञात (यो केवल एक अनुमान हो)
किन्कि कर्ली र कोइला संग्रहको चरम सिक्न छ (कोइली र किन्की घुली सिकारको लागि तल विवरणहरू हेर्नुहोस्)
एक 10 "बन्डल = 4" -5"अज्ञात (यो केवल एक अनुमान हो)
एक 12 "बन्डल = 5" -6 "अज्ञात (यो केवल एक अनुमान हो)
एक 14 "बन्डल = 6" -7"अज्ञात (यो केवल एक अनुमान हो)
एक 16 "बन्डल = 8" -9"अज्ञात (यो केवल एक अनुमान हो)
एक 18 "बन्डल = 10" -11 "अज्ञात (यो केवल एक अनुमान हो)
एक 20 "बन्डल = 12" -13 "अज्ञात (यो केवल एक अनुमान हो)
एक 22 "बन्डल = 14" - 15 "अज्ञात (यो केवल एक अनुमान हो)
एक 24 "बन्डल = 16" -17 "अज्ञात (यो केवल एक अनुमान हो)
एक 26 "बन्डल = 18" -20 "अज्ञात (यो केवल एक अनुमान हो)
एक 28 "बन्डल = 20" -22 "अज्ञात (यो केवल एक अनुमान हो)
अफ्रो केन्कीसँग चरम सिक्रति छ (ए.के. सिकारको लागि विवरण हेर्नुहोस्)
एक 16 "बन्डल = 7" - 8 "अज्ञात (यो केवल एक अनुमान हो)
एक 18 "बन्डल = 8" -9 "अज्ञात (यो केवल एक अनुमान हो)
एक 20 "बन्डल = 9" -10 "अज्ञात (यो केवल एक अनुमान हो)
एक 22 "बन्डल = 10" - 11 "अज्ञात (यो केवल एक अनुमान हो)
एक 24 "बन्डल = 11" -12 "अज्ञात (यो केवल एक अनुमान हो)
एक 26 "बन्डल = 13" -14 "अज्ञात (यो केवल एक अनुमान हो)
एक 28 "बन्डल = 14" -15 "अज्ञात (यो केवल एक अनुमान हो)
म कस्तो खरीदारी गर्न चाहन्छु?
हामी उत्पाद विवरणमा प्रत्येक रचनाको बारेमा धेरै विस्तृत विवरणमा जान्छौं, तथापि यदि तपाई अझै पनि अनिश्चित हुनुहुन्छ भने बनावटले तपाईंको कपाल संग राम्रोसँग मेल खाएमा तपाइँ हाम्रो खरिद गर्न सक्नुहुनेछ। बनावट नमूना: यहाँ क्लिक गर्नुहोस्.
मेरो कपाल कति लामो हुनेछ?
दुर्भाग्यवश हामी यस प्रश्नको जवाफ दिन सही समय फ्रेम गर्न सक्दैनौ। यद्यपि यदि बाल राम्रो तरिकाले हेरिएको छ र राम्रो तरिकाले उपचार गरेको हाम्रो ग्राहकहरु कपाल को पुन: प्रयोग गर्न सक्छन्। उचित रखरखाव र थप जानकारीको लागि कृपया हाम्रो भ्रमण गर्नुहोस् कपाल हेरचाह ट्याब.
तिम्रो व्यापारिक घण्टा के हो?"
हाम्रो इमेल सम्पर्क फारम उपलब्ध छ 24-7। प्रतिनिधि सम्भवतः प्रतिक्रियाको जवाफ दिनेछ।
कृपया हाम्रो हेर्नुहोस् फिर्ता नीति.
मैले किन भुक्तानी अनलाइन गर्न सक्दिन?
इन्टरनेट धोखाधडी र धोखाधारी शुल्क-ब्याकका कारण हामी केवल ग्राहकहरू बाट एक प्रमाणित ठेगाना प्रदान गरेका भुक्तानीहरू स्वीकार गर्दै छौं। यदि तपाईंको शिपिंग / बिलिङ ठेगाना प्रमाणिकरण गरिएको छैन वा तपाईंसँग आदेश राख्नमा समस्या भएको छ भने कृपया हामीलाई इमेलको माध्यमबाट तपाईंको नाम र फोन नम्बरको साथ सम्पर्क गर्नुहोस् र हामी तपाईंलाई एक वैकल्पिक भुक्तानी विधि प्रदान गर्नेछौं। भुक्तानीको वैकल्पिक तरिकामा पैसा आदेश, पश्चिमी संघ, वर्ग नगद, र नगद वितरण समावेश छ।
के तपाईंसँग एक थोक कार्यक्रम छ?
दुर्भाग्यवश हामी यस समयमा थोकको लागि कुनै पनि साझेदारी विस्तार गर्दैनौं। यद्यपि तपाईं हाम्रो सामेल हुन सक्नुहुन्छ ब्रान्ड राजदूत सहबद्ध कार्यक्रम!
मिसिन भट्टी बनाइयो बाँडफाँड
ह्यान्ड्स बाहिरी हातले पतला छ। कपाल बाक्लो हुन्छ जब तिनीहरू बालबालिकालाई कम गर्छन। तर तिनीहरू पतली हुन्छन् किनकि उनीहरूको पछाडि कम बाल हुन्छ र पूर्णता सिर्जना गर्न बढी बन्डलहरू आवश्यक हुन्छ। मेशिनले कफी खाएपछि कहिलेकाहीँ कपाल काटेर क्यान्सर बन्छ। मेरो प्राकृतिक कपाल एक्स्टेन्शन कम्पनीले उनीहरूको टिकाऊपन र मोटाईको कारणले मशीन कपडाहरू प्रयोग गर्न मनपर्छ।